क्रिटिकल केयर नर्सको दोस्रो सार्क क्षेत्रीय सम्मेलन शुक्रबार सुरु हुँदै, आगामी नेतृत्व आयोजक नेपाललाई – Health Post Nepal
२०७७ फागुन १४ गते | Friday, 26 Feb, 2021
क्रिटिकल केयर नर्सको दोस्रो सार्क क्षेत्रीय सम्मेलन शुक्रबार सुरु हुँदै, आगामी नेतृत्व आयोजक नेपाललाई
२०७६ कार्तिक २७ गते १०:२२
३.६% नर्सको मत प्राप्त व्यक्ति नर्सिङ संघको अध्यक्ष, नर्स ९० हजार तर जम्मा ३२ सय मतले नेतृत्व चयन
वरिष्ठ नर्स मीना कार्कीको पहिलो नर्सिङ गीत ‘हामी नर्स’ सार्वजानिक
बागमती प्रदेशले माग्यो ६ नर्ससहित १४ कर्मचारी
‘नर्सहरूको वर्ष २०२०’, जो छन् काेराेना भाइरसविरुद्ध लडाइँको अग्रमोर्चामा
एक फौजी नर्सको २५ वसन्त
क्रिटिकल केयर नर्सिङ एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा १५ र १६ नोभेम्बर (शुक्रबार र शनिबार) मा दोस्रो रिजनल फेडेरेसन अफ क्रिटिकल केयर नर्सिङ, सार्कको सम्मेलन बुटवलमा हुँदै छ । सम्मेलनमा २५ अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहित करिब ५ सयको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलनमा क्रिटिकल केयर नर्सको क्षमता अभिवृद्धि, गुणस्तरीय सेवाप्रवाहलगायत विविध विषयमा गहन छलफल हुनेछ ।
सम्मेलनमा सार्कका सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिका अलावा युएई, अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जापानलगायत देशका विज्ञहरूको समेत सहभागिता रहने एसोसिएसनकी महासचिव कविता सिटौला बताउँछिन् । ‘सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट २५ वटा र नेपालका तर्फबाट करिब २२ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन्,’ महासचिव सिटौलाले भनिन्, ‘कार्यपत्र मुख्यतः क्रिटिकल केयर नर्सको क्षमता अभिवृद्धि, उनीहरूको समस्या समाधान, नवीनतम प्रविधि तथा गुणस्तरीय सेवामा केन्द्रित हुनेछन् ।’ महासचिव सिटौलाले यो सम्मेलनबाट रिजनल फेडेरेसनको महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छिन् ।
रिजनल फेडेरेसनको नेतृत्व र महासचिवको जिम्मेवारी नेपालले पाउँदै
बुटवलमा हुन लागेको दोस्रो सम्मेलनबाट रिजनल फेडेरेसन (सार्क) को नेतृत्व आयोजक नेपालले पाउँदै छ । यसअघि भारतमा भएको पहिलो सम्मेलनबाट फेडेरेसनको नेतृत्व भारतले पाएको थियो । दोस्रो सम्मेलनले फेडेरेसनको नेतृत्व क्रिटिकल केयर नर्सिङ एसोसिएसन नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी केसीलाई सुम्पिँदै छ । त्यस्तै, फेडेरेसनको अर्को महत्त्वपूर्ण पद महासचिवको जिम्मेवारी एसोसिएसनकी महासचिव सिटौलाले पाउँदै छिन् ।
के हो नेपाली एसोसिएसन र सार्क फेडेरेसन ?
सघन उपचार कक्ष (आइसियू) मा काम गर्ने नर्स क्रिटिकल केयर नर्स हुन् । क्रिटिकल केयर नर्सिङ एसोसिएसन आइसियूमा काम गर्ने नेपाली नर्सहरूको छाता संगठन हो । यसको इतिहास धेरै पुरानो छैन । एसोसिएसनको स्थापना भएको मात्र ३ वर्ष पुगेको छ । यसको स्थापना सन् २०१६ मा भएको हो । हाल एसोसिएसनमा १ सय ७५ नर्स सदस्यका रूपमा आबद्ध छन् ।
रिजनल फेडेरेसन अफ क्रिटिकल केयर नर्सिङ, सार्क दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) मा आबद्ध राष्ट्रहरूमा कार्यरत क्रिटिकल केयर नर्सहरूको साझा संगठन हो । नेपालमा एसोसिएसनको स्थापना भएसँगै नेपालकै अग्रसरतामा सार्क क्षेत्रमा यसको गठन गरिएको हो । यसको स्थापना सन् २०१७ मा नेपालमा आयोजना गरिएको क्रिटिकल केयर नर्सहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले गरेको हो । फेडेरेसन स्थापनापछि पहिलो सम्मेलन भारतमा भएको थियो । दोस्रो सम्मेलन अहिले नेपालमा हुन लागेको हो ।
यसरी जन्मिए क्रिटिकल केयर नर्सको राष्ट्रिय र सार्कस्तरीय संगठन
क्रिटिकल केयर युनिट अति संवेदनशील ठाउँ हो, जहाँ सिकिस्त बिरामीलाई राखेर उपचार दिइन्छ । यस्तो सघन उपचार दिइने ठाउँमा काम गर्ने नर्समा विशेष दक्षताको आवश्यकता पर्दछ । तर, नेपालमा हालसम्म क्रिटिकल केयर नर्सको अवधारणा नै छैन । विशेष क्षमताका साथ अति संवेदनशील जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने स्थानमा काम गर्ने नर्सका लागि नेपालमा छुट्टै पढाइको समेत व्यवस्था छैन । यस्तोमा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका साथै पेसागत हकहितका लागि एउटा छाता संगठनको आवश्यकता थियो । त्यसैले सन् २०१६ मा आइसियूमा काम गर्ने नेपाली नर्सहरू भेला भएर छाता संगठनको स्थापना गरे । यसलाई क्रिटिकल केयर नर्सिङ एसोसिसन नेपाल नाम दिइयो । यसले आफ्ना सदस्यहरूको हक–हित, शिक्षा तथा तालिमका लागि काम गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रियस्तरमा एसोसिएसनको स्थापनामै नेपाली क्रिटिकल केयर नर्स रोकिएनन्, उनीहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफूजस्तै काम गर्ने नर्सहरूसित पनि जोडिन चाहे । नवीनतम प्रविधि तथा सीपको आदन–प्रदानसँगै पेसागत क्षमता अभवृद्धि यसको प्रमुख लक्ष्य थियो । सन् २०१७ मा क्रिटिकल केयर नर्सहरूको पहिलो अन्तर्राष्ट्रि«य सम्मेलन नेपालमा भयो । त्यतिवेलै सार्क राष्ट्र«हरूबीच क्रिटिकल केयर नर्सहरूको सझा संगठन बनाउने निर्णय भयो । सम्मेलनले रिजनल फेडेरेसनल अफ क्रिटिकल केयर नर्स, सार्क नाम दिएर साझा संगठन गठन गर्यो । नेपाललगायत सार्कअन्तर्गतका देश यसका सदस्य छन् । यसको क्षेत्रीय सम्मेलन प्रत्येक २ वर्षमा हुने प्रावधान छ । क्षेत्रीय सम्मेलनले नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्छ । सदस्य राष्ट्बीच पालैपालो सम्मेलन गर्ने र नेतृत्व पनि हस्तान्तरण हुँदै जाने व्यवस्था छ । पहिलो सम्मेलन भारतमा भएकोमा दोस्रो सम्मेलन र नेतृत्वको जिम्मेवारी नेपालले पाएको हो ।
के गर्दै छ राष्ट्रिय एसोसिएसन ? के छन् क्रिटिकल केयर नर्सका समस्या ?
क्रिटिकल नर्सको क्षमता अभिवृद्धि तथा पेसागत सीप विकासका लागि एसोसिएसनले ३ महिनाको क्रिटिकल केयर नर्सिङ तालिम सुरु गरेको महासचिव सिटौला बताउँछिन् । उनका अनुसार एसोसिएसनले एक–दुई दिनको सफ्ट वर्कसप पनि गर्दै आएको छ भने नर्सका विभिन्न कोर्ससम्बन्धी तालिम दिने गरेको छ । एसोसिएसनले क्रिटिकल केयर नर्सको छुट्टै अवधारणा ल्याउन वकालत गरिरहेको छ । यसका लागि मापदण्ड निर्धारणको काम भइरहेको महासचिव सिटौला बताउँछिन् ।
सिटौलाका अनुसार नर्सका समस्या प्रायः सबैका उस्तै हुने गर्छन् । ‘नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा बिरामी र नर्सको अनुपात ज्यादै नमिल्दो छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार लेबल ३ आइसियूमा एक नर्सले एक बिरामी मात्रै हुर्नुपर्ने हुन्छ,’ आफ्ना सदस्यको समस्याबारे महासचिव सिटौला भन्छिन्, ‘तर, हाम्रो देशमा एक नर्सले त्यसको कैयौँ गुणा बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
अन्य देशको तुलनामा नेपालमा नर्सको पारिश्रमिक ज्यादै न्यून हुनु अर्को समस्या भएको सिटौलाको ठम्याइ छ । ‘वार्डमा भन्दा आइसियूमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ, तर बढी खटिएबापत थप पारिश्रमिकको व्यवस्था छैन,’ उनी भन्छिन् ।
Tags: क्रिटिकल केयर नर्सिङ एसोसिएसन नेपाल, नर्स, रिजनल फेडेरेसन अफ क्रिटिकल केयर नर्सिङ
चैत्र २० देखि हात्तीपाइलेविरुद्धको औषधि खुवाइँदै
कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीलाई मस्तिष्कघात, स्वास्थ्यवस्था गम्भीर
तार्केश्वरमा फेरि बर्ड फ्लु भेटियो
होटेलमा मृत भेटिएकी महिलाको सुसाइड नोट : डाक्टरसँग ‘लिभिङ टुगेदर’
औषधि व्यवस्था विभागका फार्मेसी अधिकृत घुसहित प्रक्राउ
टिचिङका आवासीय चिकित्सकका गुनासा : एक वर्ष कोरोनासँग जुध्यौँ, भत्ता पाएनौँ
कोरोनाबाट मृत्यु हुने संख्या थपेको थपै सरकार
कर्णाली अस्पतालले माग्यो ठुलो संख्यामा नर्स
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अस्पतालमा टेकुले विशेषज्ञ सेवा दिने
पारामेडिक्सतर्फका ६० जनाको स्तरवृद्धि (सूचीसहित)